मधेसमा सरकार ठीक ढंगले चलेन, सरकार ढल्न सक्छ : प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रदेश नं. २ को सरकार जनताको हित अनुकूल नचलेको भन्दै सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार ढल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । ललितपुरको खुमलटारस्थित आफ्नै निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले तराई मधेसमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु मात्रै जनताको हितमा हुनसक्ने बताए ।
प्रचण्डको सफलताको रहस्य
काठमाडौँ । नेकपाका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड( ले आफ्ना एजेण्डाहरु पत्रकारले जनताका माझमा पुर्याइ दिएका कारण सफल भएको बताएका छन् । आइतबार नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको ज्ञापनपत्र बझ्ने क्रममा आफु पत्रकारकै कारण यहाँसम्म आइपुगेको बताए ।
धनजनकाे क्षतिप्रति अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा दुःख व्यक्त
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार साँझ आएको हावाहुरीबाट बारा र पर्सा जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति भएकामा दुःख व्यक्त गरेका छन् । अध्यक्ष दाहालले उक्त घटनामा परी ज्यान गुमाउनुहुनेप्रति शोक व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
काँग्रेसप्रति प्रचण्डकाे आक्राेश : यत्ति कुरा पनि नबुझ्ने हाे त ?
काठमाडौँ । अमेरिका भ्रमणमा रहँदा त्यहाँका नेपालीहरूले आफुमाथि गरेको व्यवहारप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खुलेरै आपत्ती जनाएका छन् । आइतबार रिपोटर्स क्लबको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले आफुलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अपराधीको रूपमा उभ्याउन खोजिएको भन्दै आक्रोश प्रकट गरे ।
स्वदेश फर्केर प्रचण्डले भने : अमेरिकास्थित केही नेपालीहरू आफुलाई ‘सुपर पावर’ ठान्छन्
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वदेश फिर्ता भएका छन् । पत्नी सीता दाहालको उपचारको लागि अमेरिका भ्रमणमा रहेका प्रचण्ड बिहीबार साँझ काठमाडौँस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन् ।
अमेरिका भ्रमणबाट प्रचण्ड अपराह्न ४ बजे काठमाडाैँ आइपुग्ने
काठमाडौं । पत्नी सीता दाहालको उपचारको लागि अमेरिका भ्रमणमा रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड आज स्वदेश फर्किदैँ छन् । अमेरिकामा श्रीमती सीता दाहालको एचयनचभककष्खभ क्गउचबलगअभिबच एबकिथ ९एक्ए० रोगको स्वास्थ्य जाँच पश्चात उनी स्वदेश फर्किन लागेका हुन् ।
पत्नी सीताको उपचारपछि नेपाल फर्कदै नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौँ । पत्नी सीता दाहालको उपचारपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ न्युर्योकबाट नेपाल फर्किदै गरेका छन् । अध्यक्ष दाहालसँगै पत्नी सीता, छोरी गंगा तथा नर्स अम्बिका पुडासैनी न्यूयोर्कबाट नेपालको लागि उडेका हुन् ।
प्रचण्ड अमेरिकाबाट कस्तो रुपमा फर्कने हुन् ?
काठमाडौँ । पत्नी सीता दाहालको उपचारार्थ भन्दै अमेरिका पुग्नुभएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यष प्रचण्डले पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापारमात्र गरिरहनुभएको छैन । उपचार त देखाउनेमात्र काम हो । उहाँ अमेरिकासँग सम्बन्ध सुदृढ बनाउने अवसर उपयोग गर्न उड्नुभएको हो ।